वुहान च्यायौ ! - China Radio International
वुहान च्यायौ !
(GMT+08:00) 2020-04-21 16:42:32
मार्च १८ ले चीनलाई लगभग दुई महिनापछि धेरै हदसम्म खुसी तुल्यायो र सारा विश्वलाई आशातीत बनाएको छ। हाल विश्व कोरोना भाइरसको चपेटामा परेको छ। तापनि सो दिनले यसै भाइरसको उद्गमस्थल मानिएको चीनको मध्यभागमा रहेको हुपै प्रान्तको सदरमुकाम वुहानमा पहिलो भाइरस संक्रमित देखिएदेखि र फैलिँदै उग्ररूप लिएपछिको झन्डै ८० दिनपछि अथाह पीडाबीचमा एउटा सुखद खबर दिएको थियो। सबै कुरा टक्क अडेर खाली सन्त्रासको हालिमुहाली भइरहेको अवस्थामा समस्त चीनवासीको प्रयास, सारा विश्वको प्रार्थना र उहान तथा हुपैवासीको तपस्याको फल प्राप्त भएको दिन थियो, त्यो। हो, त्यस दिन चीन र चिनियाँ जनताको अथक प्रयास सार्थक भएको थियो।
५० हजार वुहानवासीलाई कोरोना भाइरस संक्रमित बनाएको र २४ सयभन्दा बढीको ज्यानसमेत गएको उक्त सहरमा मार्च १८ को दिन पहिलोपल्ट एकजना पनि नयाँ भाइरस संक्रमित थपिएन। अर्थात् एकै दिनमा सयौंको मृत्यु र हजारको संख्यामा संक्रमित थप्दै गएको सहरमा पहिलोपल्ट शून्यमा झरेको थियो। सो दिन चीनले अदृश्य शत्रुमाथि विजय हासिल गरेको थियो र मानवजातिकै लागि खुसीको दिन थियो।
मध्य चीनको द्वार मानिएको जीवन्त सहर वुहानमा २०१९ डिसेम्बर ३१ मा पहिलो पल्ट कोरोना भाइरसबाट संक्रमित व्यक्ति पाइएको थियो। २०२० जनवरी २२ बुधबारसम्ममा हुपैमा मात्र र चीनभरि ५४३ जना संक्रमित र १७ जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था थियो। सोही दिन बिहान १० बजेसम्म ९ जनाको मृत्यु भएकोमा रातिको १० बजेसम्म थप आठ जना बढेर १७ पुगेको थियो। यसले उग्ररूप लिने सम्भावना देखेपछि वुहानले जनवरी २३ बिहान १० बजेबाट सार्वजनिक यातायात स्थगित गर्नुका साथै बहिर्गमन तथा आवागमनमा समेत रोक लगाई सहरलाई पूर्णरूपमा लकडाउन गरेको थियो।
नव वर्षको पूर्वसन्ध्या (जनवरी २४) को तयारीमा जुटेका र सप्ताह लामो वसन्त चाडको बिदा मनाउने क्रममा रहेका समस्तलाई अन्योलमा पारेको थियो। जनवरी २३ मै भाइरसको प्रतिकारका लागि चीनले एक बिलियन युआन विनियोजन गरेको थियो। (मार्च ३ सम्ममा चीनले १०८.७५ बिलियन युआन विनियोजन गरिसकेको छ।) यस कोरोना भाइरसले विस्तारै उहानलाई आफ्नो चपेटा लिँदै गएको थियो। जनवरी २४ मा ४० जना स्वास्थ्यकर्मीको चिनियाँ सैनिक टोली वुहानका लागि खटाइएको थियो। जनवरी २५ नयाँ वर्षको दिन सांघाईबाट अर्को स्वास्थ्यकर्मीको टोली उहान पुगेका थिए। वसन्त चाड मनाउने तरखरमा रहेको चीन स्तब्ध त थियो नै तर वुहानवासीले अथाह पीडा झेल्नुपर्ने अवस्था थियो। यस्तो निर्मम अवस्थामा समस्त चिनियाँ र चीनलाई माया गर्ने सबैले एक स्वरमा वुहानको हौसला बढाउँदै भनेका थिए, वुहान च्यायौ, चोङग्वो (चीन) च्यायौ। यसको शाब्दिक अर्थ तेल थप्नु हो भने भावार्थ हौसला बढाउने हुन आउँछ। चीनमा प्रचलित शब्दमध्येको एक च्यायौ यसै वुहानसँग सम्बन्धित छ।
कथनअनुसार, छिङ वंशकालीन सम्राट् ताओक्वाङको पालामा चाङ यिङ नाम गरेका व्यक्ति जो वुहानका पिता भनेर कहलिएका चाङ चतोङका पिता थिए, उनैले क्विचौमा अधिकारीको रूपमा कार्यरत रहँदा सो क्षेत्रका विद्यार्थीले राम्रोसँग पढून् भन्ने हेतुले आफ्ना मातहतका कर्मचारीलाई साँझपख गस्ती जाँदा टुकी या लालटिन बालेर पढिरहेकालाई तेल थप्न आदेश दिएका थिए। यसरी यो च्यायौ शब्दको उत्पत्ति भएको मानिन्छ। चीन, हुपै र वुहानमा भाइरस संक्रमणले महामारीको रूप लिँदै गर्दा सारा विश्वले सहानुभूति प्रकट गर्दै वुहान च्यायौ भन्दै हौसला बढाइरह्यो।
वुहान च्यायौ भनेर आवाज बुलन्द बनाइरहँदा उहान सँगसँगै हुपैका अरू सहरले पनि क्रमशः सार्वजनिक यातायात स्थगित गर्दै लगेको थिए। जनवरी २५ सम्ममा चीनका ३० वटा सहर र प्रान्तले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेका थिए। सोही दिन १५ दिनमा तयार गर्ने गरी अर्को १३ सय शय्याको लैसनसान अस्पताल निर्माणको काम अघि बढाइयो। एक दिनअघिमात्र १० दिनमा एक हजार शय्याको ह्वोसनसान अस्पताल निर्माण गर्ने भन्दै युद्धस्तरमा काम बढाइसकेको थियो। जनवरी २६ बाट वुहानको स्थानीय सरकारले निःशुल्क बससेवा, सरकारी गाडी र आपूर्ति साधनबाहेक सबैमा बन्देज लगायो। चिनियाँ वसन्त चाडका कारण ५० लाख उहानवासी बाहिरिएका र कामविशेष र भ्रमणमा समेत आएका गरी ९० लाख मानिस वुहानमा रहेको त्यहाँका मेयरले सोही दिन जनाएका थिए। चीनले वुहानलाई तत्काल लकडाउन नगरेको भए अहिलेसम्म विश्वमा अकल्पनीय दुर्घटना भइसकेको हुन्थ्यो। औषधि तथा स्वास्थ्य विज्ञान संस्था मेडआरकाइभको अनुमानअनुसार, वुहानलाई लकडाउन नगरिएको भए फेब्रअरी १९ सम्ममा विश्वभरका साथ लाखभन्दा बढी मानिस यस भाइरसबाट संक्रमित हुने थिए।
यो भाइरस श्वासप्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने तर पहिलेका कोरोना भाइरसभन्दा केही भिन्न प्रकृतिको भएकाले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले कोरोना भाइरस रोग २०१९ (कोभिड—१९) नामकरण गरेको छ। वुहानमा भाइरसले विकराल रूप लिएपछि दुई ठूला अस्पतालको निर्माणसँगै फेबु्रअरीको पहिलो सातातिर खेल भवन, सभागृहजस्ता स्थललाई १६ वटा शिविर अस्पतालमा परिणत गरिएको कुराले पनि त्यहाँ स्थिति सामान्य छैन भन्ने बुझिन्थ्यो। जनवरी २८ मा प्रधानमन्त्री ली खछ्याङ निरीक्षण र निर्देशन दिन वुहान पुगेका थिए। जनवरी ३१ मा डब्लूएचओले वुहानलाई कोरोना भाइरसको इपिसेन्टर भन्दै विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटकालको घोषणा नै गर्‍यो। फेब्रअरी १३ सम्ममा हुपैमा मृत्यु हुनेको संख्या १३ सयभन्दा बढी पुगिसकेको थियो र संक्रमित झन्डै ५० हजार थिए। यसैबीच वुहानका अस्पतालमा अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई अत्यावश्यक मास्क, गगल्स तथा सुरक्षात्मक पोसाकको कमी भएलगत्तै देशविदेशबाट सहयोग प्राप्त पनि भइरहेको थियो। मध्य फेब्रुअरीमा आएर बल्ल वुहानलगायतका प्रभावित क्षेत्रमा संक्रमणको संख्याको रफ्तार घट्न थालेको थियो। तापनि हुपैमा मात्र ६० हजार संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या दुई हजार पुगिसकेको थियो। साथै चीनले वुहानवासीको घरघर गएर संक्रमितको जाँचसमेत थालेको थियो। मार्च ३ सम्म आइपुग्दा चीनभरि संक्रमितको संख्या ८० हजार नाघिसकेको थियो र झन्डै तीन हजारको मृत्यु भइसकेको थियो।
यसैबीच मार्च ६ मा वुहानबाहेक हुपै प्रान्तभरि नयाँ संक्रमित थपिएन र यो चीनको अदृश्य शत्रुमाथिको युद्धमा जित हासिल हुँदै गएको संकेत थियो। मार्च १० मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ पहिलोपल्ट वुहान पुगेका थिए। मार्च १६ बाट हुपैका विभिन्न सहरले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने घोषणा गर्‍यो भने मार्च १७ मा वुहानबाहेक हुपैका ७१ ठूला, साना सहरहरूलाई न्यून जोखिम र अरू चार सहरलाई मध्यजोखिमको रूपमा घोषणा गरियो। चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगका अनुसार, मार्च १७ मा चीनभरिमा वुहानमा मात्र एकजना नयाँ संक्रमित थपिएको थियो र योसँगै वुहानमा मात्र संक्रमितको संख्या ५० हजार ५ पुगेको थियो। साथै वुहानबाहेक हुपैभरि १३ दिनअघिदेखि नयाँ भेटिएको थिएन। मार्च १८ बुधबार भने वुहानमा समेत नयाँ संक्रमित भेटिएन। चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगका प्रवक्ता मी फङले मार्च १८ मा पहिलोपल्ट चीनभरि घरेलु रूपमा भाइरस संक्रमित नदेखिएको घोषणा गरे।
मार्च ३० सम्ममा हुपैमा संक्रमित झन्डै ६८ हजारमध्ये ६२ हजार बढीको सफल उपचार भइसकेको छ। यस अवधिभरमा चीनभरिका २० हजार बढी स्वास्थ्यकर्मी हुपै र उहान पुगेर उपचारमा खटेका थिए। यस युद्धका मुख्य योद्धा स्वास्थ्यकर्मीमध्ये वुहानका तीन हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित पनि भए र केहीले वीरगति प्राप्त गरे। यस्तो दारुण अवस्थाको वसन्तमा उहान फुल्न सकेन। यहाँ फुल्ने वसन्तकालीन पुष्प पनि विश्वभरका पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने माध्यम थियो। तीन हजार वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको वुहान चीनको व्यापार, पारवहनको केन्द्रबिन्दुसँगै पर्यटन, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र शिक्षाका लागि पनि प्रसिद्ध छ। यसै वुहानले २०१९ अक्टुबरमा सातौं सैन्य विश्व खेलकुद आयोजना गरेको थियो, जसमा नेपालको पनि सहभागिता थियो। पछिल्लो समय राजनीतिक परिदृश्यमा वुहान भावनाका कारण पनि चर्चित छ। २०१८ मा चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच दोक्लम काण्डपछिको असहज स्थितिमा दुई देशबीचको सम्बन्ध उकास्न यही वुहानमा गरिएको अनौपचारिक वार्ता 'वुहान भावना' का रूपमा परिचित छ।
आज वुहानसँगै हुपै फेरि पनि पहिलेको लयमा फर्किसकेको छ। अप्रिल ८ बाट उहान पूर्णरूपमा खोलिँदै छ तर यता चीनतिर जनजीवन सामान्य बन्दै जाँदा विश्वको अन्य भागमा भाइरसले विकराल रूप लिँदै गएको छ। साथै पछिल्लो समय बाहिरबाट आएकाहरूमा देखिएको संक्रमणले पनि चीनलाई फेरि चिन्तित बनाएको छ। हाल विश्वभर एकै स्वरको खाँचो छ, च्यायौ विश्व !
(यो आलेख अन्नपूर्णपोस्ट राष्ट्रिय दैनिकमा २०७६ चैत १९ (२०२० अप्रिल १) मा प्रकाशित छ।